प्रेम नाटक कि नौटङ्की ?::Hamro Koshi Awaj / awaz
प्रेम नाटक कि नौटङ्की ?
२०७७ फागुन २
अहिलेका अधिकांश युवापुस्ता अरुलाई देखाउनका लागि प्रेम गर्छन् । प्रेम पनि के भनौ । प्रेमको नाटक रच्छन् । साथीहरुका अगाडि आफ्नो ब्वायफ्रेण्ड/गर्लफ्रेण्ड नहुँदा उनीहरु आपूmलाई कमजोर महशुु गर्छन् । त्यसैले उनीहरु सोच्छन, ‘एनि हाउ ब्वायफ्रेण्ड/गर्लफ्रेण्ड बनाउ ।’
यहाँ हामी त्यस्ता प्रेमीहरुको बारेमा कुरा गर्दैछौ जसले देखावती प्रेम गरिरहेका छन् । यस्तो प्रेमको टिकाउ हुँदैन् । आज प्रेम भोलि ब्रेकअप पर्सी अर्कैसँग प्याच अप । अहिलेको युवापुस्ता यही कल्चरमा हुर्केका छन् । प्रेम उनीहरुको लागि टाइमपास मात्र हो । वास्तममा उनीहरुलाई प्रेमको अर्थ र महत्व थाहै छैन ।
रिलेसनसिपमा एक अर्काप्रति इमान्दार हुनु धेरै जरुरी हुन्छ । तव मात्र एक सम्बन्ध साँचो रहन्छ । एक अर्काको भावनाको बुझनु भनेको सम्बन्ध बलियो बनाउनु हो । तर अहिलेको समयमा धेरै जसो पुरुषहरु आफ्नो रिलेसनको लिएर इमान्दार हुँदैनन् । आफ्नो पार्टनरको धोका दिन्छन् । जो पुरुष प्रेमिकाको धोका दिने बारेमा सोच्छ उसलाई आभास हुँदैन् कि ऊ धोका दिदैछ र यो गलत हो । त्यसैले त भनिन्छ नि, पुरुषको तुलनामा महिलाहरु कम धोका दिन्छन् ।
प्रेमिकाप्रति इमान्दार हुँदैनन्
केही यस्ता पुरुषहरु हुन्छन जो आफ्नो प्रेमिकाको लागि इमान्दार हुन्छन् भने केही पुरुषहरुलाई कसैको भावनाको कदर हुँदैन् । यस प्रकारको पुरुषहरु सिर्फ प्रेमिकाको प्रयोग मात्र गर्छन् तर उसले प्रेमिकाको स्पेसल महसुस गराउँछन् । वास्तवमा ऊ अलिकति पनि इमान्दार हुँदैनन् ।
प्रेमिका प्रति असुरक्षित महसुस गर्छन्
हरेक यस्तो व्यक्ति धोका दिन्छन भन्ने छैन् । तर केही यस्ता पुरुष हुन्छन् जो आफ्नो सम्बन्धको बारेमा असुरक्षित हुन्छन् । जसको कारण नचाहदा नचाहँदै आफ्नो पार्टनर प्रति गलत गर्छन् । उनीहरुलाई आफ्नो पार्टनर गुमाउने डर हुन्छ । यसकारण आफ्नो प्रेमिकाप्रति इमान्दार हुँदैनन् र धोका दिन्छन् ।
जहिले पनि मानिसहरुलाई उसँग जति छ त्यो भन्दा अधिक पाउने इच्छा हुन्छ । र, ऊसँग भएको चिजको कदर हुँदैन् । यस्ता पुरुषहरु आफ्नो प्रेमिकामा पनि कमी देख्न थाल्छन् उसको दिमागमा जहिले पनि यो भन्दा राम्रो पाउन सक्छु भन्ने हुन्छ । यस्ता पुरुषहरुमा प्रेमिकाको धोका दिने प्रवृति अधिक हुन्छ किनकी ऊसँग जे छ त्यसमा उसलाई सन्तुष्टि मिल्दैन् ।
भावनात्मक रुपमा कमजोर
पुरुष भावनात्मक र मानसिक रुपमा कमजोर हुन्छन् । त्यसैले उनीहरुलाई मुर्ख बनाउन सजिलो हुन्छ । मानसिक रुपमा कमजोर भएको कारण उनीहरुमा ‘सेल्फ कन्ट्रोल’ को कमी हुन्छ । त्यसकारण उनीहरुलाई आफ्नो प्रेमिकालाई धोका दिन मुस्किल हुँदैन् । यस्ता मानिसबाट छिट्टै प्रभावित हुन्छन् र कहिलेकाँही अरुको कुरा सुनेर आफ्नो पार्टनरको भावनाको वेवास्ता गर्छन् । -एजेन्सी
प्रजातन्त्र दिवसको सार्थकता
हामीले सहरलाई हरियो बनाउन सक्दैनौं ?
अक्सर मानिस झुट बोल्छन्, झुट बोलेको यसरी थाहा पाइन्छ !
युवापुस्ताको प्रेमः गाँसिने, छुट्ने